Ukuzalwa Kabusha | IBandla LikaNkulunkulu USomandla
2018-03-09 00:13:59 22
Kwakungo-2003, lapho ngakhushulelwa khona ekubeni ngibe umholi weqembu lethu lobuvangeli. Kanye nalokhu kuphakanyiswa esikhundleni sami umklamo womsebenzi wami nawo wanda, futhi ngazizwa ngijabule ngokwengeziwe: Igolide licwebezela yonke indawo. Ngizimisele ukwenza kahle umsebenzi wami futhi ngikhuphuke njalo ukuze abafowethu nodadewethu bezoba nomona futhi bangihloniphe ngokwengeziwe. Lokho kuyoba kuhle kakhulu! Ngesikhathi ngifika lapho ngizokwenza khona umsebenzi wami, umholi wakucabanga ukuthi ngisanda kuthatha lolu hlobo lomsebenzi futhi angikabi nakho okuhlangenwe nakho kanye nekhono, ngakho wahlanganisa ndawonye abanye abaholi bamaqembu obuvangeli basezindaweni eziseduze ukuze sizofunda komunye nomunye. Kodwa phakathi nomhlangano, ngabona ukuthi bonke babebadala kunami nokuthi babengabezinga eliphansi. Ngesikhathi behlanganyela ngezwi likaNkulunkulu futhi babengakhulumi ngokucacile njengoba ngangenza. Ngazithola sengizazisa futhi ngingacabangi lutho nhlobo ngabo. Ngaba nomuzwa wokuthi nakanjani ngizokwazi ukwenza umsebenzi omuhle ngokwethembela emandleni ami siqu. Ngemva komhlangano masinyane ngaya kuwo onke amaqembu ukuze ngithole ukuqonda ngomsebenzi wawo. Lapho ngithola amaphutha athile nokusilela emsebenzini wabo nokuthi amanye amalungu amaqembu ayengakwazi ukushumayela ivangeli kanye nokunikeza ubufakazi ngoNkulunkulu, ngakhathazeka futhi ngacasuka. Ngazithola sengibathethisa abafowethu nodadewethu: “Ingabe ukufeza umsebenzi wenu ngale ndlela ngempela kungavumelana nentando kaNkulunkulu? Anifuni ukukhokha inani kodwa nifuna ukusindiswa uNkulunkulu. Ingabe lolu hlobo lomuntu lunayo ingqondo? …” Futhi ngezinye izikhathi phakathi nokuhlanganyela ngangibukisa, ngitshele wonke umuntu indlela engangihlanganyele ngayo emsebenzini wevangeli, konke mayelana nemiphumela engangibe nayo. Ngesikhathi ngibona umona ebusweni babafowethu nodadewethu, ngangizigqaja kakhulu futhi ngibe nomuzwa wokuthi ngangethembeke kakhulu kunabanye. Ngokuhamba kwesikhathi, abafowethu nodadewethu babehlala bexoxa nganoma iyiphi inkinga nami futhi babengasagxili ekuthandazeni kuNkulunkulu noma ekwethembeleni Kuye. Futhi angizange nje kuphela ngizizwe ngesaba, kodwa ngakujabulela lokho. Ekugcineni, ngalahlekelwa ngokuphelele ukusebenza koMoya oNgcwele futhi angabe ngisakwazi ngempela ukusebenza. Ekuqaleni kuka-2004 ibandla langisusa emisebenzini yami futhi langibuyisela ekhaya ukuba ngiyozakha ngokomoya. Ngibhekene nalo mphumela, kwaba sengathi ngiwele masinyane emgodini ongenamkhawulo. Umzimba wami wonke wawubunile futhi ubuthakathaka emuzweni onamandla wokukhungatheka, futhi ngazithola ngicabanga: Kwakukuhle kakhulu lapho ngiqala ukwenza umsebenzi wami. Futhi manje, ukubuyela emuva ngokuhlazeka okunje, ngizowubheka kanjani umndeni wami kanye nabafowethu nodadewethu edolobheni lakithi? Bazocabangani ngami? Ingabe bazohlekisa ngami, bangibukele phansi? Ngokushesha lapho ngicabanga ngokulahlekelwa ukubukeka nesikhundla sami ezingqondweni zabanye abantu ngazizwa sengathi ngizohlakazeka. Ngangiphila esimweni esibi nengangingakwazi ukuzikhipha kuso futhi ngingakwazi ngisho nokuqhubeka ngifunde amazwi kaNkulunkulu. Phakathi nalobu buhlungu, angikwazanga ukungathandazi kuNkulunkulu: “O Nkulunkulu! Sengibuthakathaka kakhulu futhi umoya wami usebumnyameni ngenxa yokuthi angikwazi ukwamukela iqiniso lokuthi ngehlisiwe. Futhi angizimisele ukulalela amalungiselelo ebandla kodwa ngiyazi ukuthi yonke into oyenzayo yinhle futhi iqukethe intando Yakho enomusa. Ngizimisele ukukhanyiselwa Nguwe futhi ngiqonde intando Yakho.” Ngemva kokuthandaza, lawa mazwi kaNkulunkulu angilethela ukukhanyiseleka: “Ekufuneni kwakho, unokucabanga okuningi kakhulu komuntu ngayedwana, amathemba, kanye nekusasa. Umsebenzi wamanje uqondene nokubhekana nokulangazelela kwakho isikhundla kanye nalokho okukhulu okulangazelelayo. Amathemba, ukulangazelela[j]isimo, kanye nokucabanga konke kumele isimo sakudala sobusathane. … Yize sewufike kulesi sigaba namuhla, awukasidedeli isimo sakho, kodwa uhlala wehluleka “ukubuza mayelana” nakho futhi usibheke nsukuzonke, ngokwesaba okukhulu ukuthi ngelinye ilanga isimo sakho siyolahleka futhi igama lakho lonakale. … Manje seningabalandeli, futhi niyasiqonda kancane isigaba somsebenzi. Nokho, anikakubeki eceleni ukulangazelela kwenu izikhundla. Uma isikhundla sakho siphezulu ufuna kahle, kodwa uma isimo sakho siphansi uyayeka ukufuna. Izibusiso zesikhundla zihlala zisemqondweni wakho. Kungani iningi labantu lehluleka ukuphuma emicabangweni emibi? Akubangelwa amathemba ‘afiphele’?” (“Kungani Ungazimisele ukuba Isiqhathaniso?” kwethi Izwi Livela Lisenyameni). Ukwahlulela okwambulwe emazwini kaNkulunkulu kwangivusa kabuhlungu, futhi kwangenza ngaqonda ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu wangaleso sikhathi wawungowokubhekana nokulangazelela kwami isikhundla, ukungenza nginyathele endleleni efanele ekuphileni. Ngicabanga emuva kusukela ngesikhathi ngiqala ukwenza umsebenzi wami, nganginombono omuhle kakhulu ngalezo zikhathi enganginesikhundla ngazo. Ngangizethemba kakhulu futhi ngingakwesabi ukuhlupheka noma ubunzima. Ngesikhathi ngibhekene nothile engilungisa noma kunezici zami ezithenwayo angizange ngenqabe. Kodwa kamuva, emva kokuba sengidedelwe futhi sekufanele ngibuyele ekhaya ngangingasakwazi ukuphuma ekubeni kwami nombono ongemuhle. Ngabona ukuthi ngaphandle kwakubonakala sengathi ngangifeza umsebenzi wami futhi ngangenza intando kaNkulunkulu, kodwa empeleni ngangiphethe ifulegi lokufeza umsebenzi wami ngesikhathi ngiphethe izinto mathupha. Empeleni kwakuwukusebenzisa uNkulunkulu ukwanelisa izifiso zami ezazifihlekile iminyaka eminingi—ukuthola isikhundla kanye nokubonakala ngiphakeme. Futhi kwakungekhona ukufuna iqiniso futhi ingasaphathwa eyokufeza umsebenzi wesidalwa wokwanelisa uNkulunkulu. Ngesikhathi ngenza umsebenzi wami futhi ngabona ukusilela kwabafowethu nodadewethu, angizange ngibasize ngothando kuphela, kodwa ngathembela esikhundleni sami ukuze ngibathethise. Ngenhloso ngaziphakamisa mina, ngaba ufakazi wami ngokwami, futhi ngangikhathazeke ngokuthi wonke umuntu abheke mina futhi ahloniphe mina. Kusukela ekuqaleni kuye ekugcineni, nganginomgomo owodwa engqondweni nasezenzweni zami—ingabe lokhu kwakungekhona yini ukuncintisana okusobala noNkulunkulu ngesikhundla? Umuntu wadalwa nguNkulunkulu, ngakho kufanele sikhonze futhi sibheke Kuye. Izinhliziyo zethu kufanele ziqukathe kuphela isikhundla sikaNkulunkulu, kodwa ngangiwumuntu ongcolile futhi okhohlakele, ophansi owayefuna ukuncintisana ngesikhundla noNkulunkulu. Ingabe lokhu akusikhona yini ukuzithwala okubi? Ingabe lokhu akuyona into eyesabekayo nephikisana noNkulunkulu? Ingabe lokhu kuziphatha akulona yini icala elikhulu esimweni sikaNkulunkulu? Lapho ngicabanga ngalokho, ngazithola ngiqhaqhazela ngokwesaba isimo sami sokuzithwala. Kwabonakala ukuthi ngangisesimweni esiyingozi ngempela sokuba ngithole isijeziso sikaNkulunkulu! Isimo sikaNkulunkulu siwukulunga nobungcwele futhi asiwabekezeleli amacala esintu. Angakubekezelela kanjani ukuvumela mina, lo mntwana ovukelayo, ukuba ngokungenakuzithiba ngiphazamise futhi ngone umsebenzi Wakhe? Kungaleso sikhathi kuphela lapho ngabona khona ukuthi ukubuyiselwa kwami emuva kwakuwukungibekezela okukhulu nothando olukhulu lukaNkulunkulu. Ngaphandle kwalokho, ngabe ngenza ububi obukhulu kakhulu kwaze kwaba sezingeni lokuba angabe esakwazi ukungixolela. Khona-ke kwakuyobe sekonakele kakhulu. Lapho ngicabanga ngakho ngokwengeziwe ngaba nokwesaba okwengeziwe, futhi ngezwa ngokwengeziwe ukuthi ngimkweleta kakhulu uNkulunkulu. Ngazithola sengiguqe phambi Kwakhe futhi ngithandaza: “O Nkulunkulu! Imvelo yami inokuzithwala kakhulu, ayinasisindo ngempela. Angilifunanga iqiniso ngesikhathi ngenza umsebenzi wami, futhi angizange ngicabange ngokukhokhela uthando Lwakho. Ngangimatasa ngehla ngenyuka ngenxa yegama kanye nesikhundla, futhi ngabeka inhliziyo yami ekubeni phambili ebandleni, ngakho kwakungenzeka kanjani ukuthi ngingakhubeki futhi ngiwe ngesikhathi ngifeza umsebenzi wami nginalolo hlobo lwenhloso? Ukuba ukujezisa nokusola Kwakho, nokubheka kanye nokuthena Kwakho akuzange kungifikele ngesikhathi, ngokuqinisekile ngabe ngaqhubeka nendlela yesitha sikaKristu. Ekugcineni ngangizokona ithuba lami lokusindiswa. O Nkulunkulu! Ngiyawubonga umusa Wakho nensindiso Yakho kimi. Kusukela ngalolu suku, ngizimisele ukuyeka izifiso zami zesikhundla futhi ngifune iqiniso, futhi ngamukele ngokwengeziwe ukwahlulela nokusola Kwakho, ukuze ngiguquke masinyane esimweni sami esonakele.” Ukukhanyiselwa nokuqondiswa uNkulunkulu kwangikhipha esimweni esiphambene futhi kwangenza ngazibona ukuthi nginesimo sokuzithwala kanye nengqikithi yokumelana noNkulunkulu. Futhi ngazuza ukuqonda isimo sokulunga sikaNkulunkulu, ngase ngizwa ukukhululeka okukhulu enhliziyweni yami. Futhi ngangizimisele ukuqhubeka nokufuna iqiniso kunoma yisiphi isimo uNkulunkulu asibeka kimi, futhi ngiqonde ngokujule ngokwengeziwe intando Yakhe.
Imibhalo yokuqala ayinawo amazwi athi “isifiso sokuba.”
Okwedlule: Ukwahlulela Kungukukhanya
UChangkai eDolobheni laseBenxi, esiFundazweni saseLiaoning Amazwi ajwayelekile athi “Abalungile baba ngabokugcina” amazwi engiwajwayele kakhulu. Min…
UZhao Xia Esifundazweni saseShandong Igama lami nginguZhao Xia. Ngazalelwa emndenini ojwayelekile. Ngenxa yezisho ezifana nalezi “Umuntu uzenzela ig…